Ngwunye ịgbaze agbaze, Ngwakọta Ọkụ Escalator, Slitting Machine - Hongli
Ihe ụlọ ọrụ
Tọrọ ntọala na 1997, Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd bụ ọkachamara na onye na-eduga emeputa maka akụrụngwa nchọpụta ọrịa gụnyere Digital Thermometers, Infrared Thermometers, na Digital Sphygmomanometer wdg. Ikike anyị kwa ọnwa dị ihe dịka 850,000 nkeji maka temometa na 100,000 nkeji. maka Sphygmomanometer.
Dị ka ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu, ngalaba R&D anyị nwere ndị injinia, ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ na ahụmịhe bara ụba nke optoelectronics, semiconductor na IC design wdg.
Ojiji nke Siemens servo motors na ndị na-ahụ maka ngagharị Siemens nwere ike inye njikwa esemokwu kachasị ike, sistemụ arụmọrụ ntanetị dị mma, enwere ike ijikọ na ofntanetị nke Ihe. Igwe njikwa ahụ na-esite na sistemụ nchịkwa bụ isi, yana ọnụọgụ dị ala na ntụkwasị obi dị elu. Njikwa cylinder Enwere ike ịhazi ntinye anya na-adịghị arụ ọrụ dabere na ihe ndị ahịa chọrọ, yana nhazi dị iche iche dị.
Preczọ dị elu, etiti ike ndọda, mgbanwe ike na - agbanwe agbanwe. Ojiji nke iji ogologo ya na ihe eji eme ihe na U na-eme ka data ahụ zie ezi. A na-achịkwa ụgbọ ala gantry site na Japanese Panasonic servo motor, na-enwe nkwụsi ike dị elu. N'iji usoro sistemụ Keyence, njikwa ihuenyo mmetụ aka nke ụlọ ọrụ, arụmọrụ dị mfe ma nwee ntụkwasị obi karịa. Enwere ike ịchekwa data nha, wdg na-akpaghị aka na nchekwa data iji mee ka ajụjụ data dị n'ihu na ịchọpụta ngwaahịa a.
Ndi okacha amara
ihe osise ohuru